Senior Midwest Climate & Energy Program Officer - McKnight Foundation
Sarkaalka Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest Sare
Machadka McKnight wuxuu raadiyaa Sarkaalka Barnaamijka Waayeelka si uu u hormariyo hadafka uu leeyahay Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest (MC&E) barnaamijka si talaabo geesinimo leh looga qaado dhibaatada cimilada iyadoo si weyn loo goynayo wasakheynta kaarboonka badhtamaha bartamaha sanadka 2030. Sarkaalka cusub ee barnaamijka waayeelka ayaa kaalin hoggaamineed ka qaadan doona horumarinta galka iyo iskaashiga guud ahaan sideed gobol oo diiradda saaraya istiraatiijiyad qoto dheer . Doorkani wuxuu soo bandhigayaa fursad xiiso leh oo loogu talagalay hoggaaminta fikirka ee ku saabsan waxqabadyada deeqaha, oo lagu ogeysiiyo ballanqaad qoto dheer oo ku aaddan sinnaanta jinsiyadda, si loo taageero loona dardar-geliyo casriyeynta cimilada iyo istiraatiijiyadda
Ka warbixinta Isuduwaha Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest, Sarkaalka Barnaamijka Sare wuxuu kormeeri doonaa oo dhisi doonaa deeqo muhiim ah iyo iskaashi lala yeesho maalgeliyeyaasha dhexdhexaadka ah oo si firfircoon ula shaqeeya McKnight's Maalgashiga Saameynta kooxda iyo Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah kooxda barnaamijka.
Sarkaalka Barnaamijka Waayeelka ee MC&E waa door shaqsi tabarucaad ah. Mawqifku wuxuu u warbixinayaa Maamulaha Barnaamijka MC&E.
Hirgelinta Istiraatiijiga ah
Ka ciyaar door hogaamineed nashqadeynta iyo hirgalinta hal ama in kabadan aag istiraatiijiyad barmaamijka decarbonization (tusaale, badalida nidaamka tamarta, koronto dhalinta gaadiidka iyo dhismayaasha, iyo kalagoynta kaarboonka meelaha shaqeeya ee Minnesota iyo Upper Midwest). Tan waxaa ka mid ah in la ogaado farqiga iyo fursadaha berrinka u bisil ka-qaybgalka sama-falka iyo fulinta istiraatiijiyad deeq-lacageed oo waxtar leh si loo geeyo kheyraadka.
Maareynta faylalka deeqaha ee taageera wax ka beddelka nidaamka tamarta, koronto gelinta gaadiidka iyo dhismayaasha, iyo kalagoynta kaarboonka meelaha shaqeeya ee Minnesota iyo Upper Midwest.
Horumarinta iyo joogteynta xiriirka deeq-bixiyeyaasha jira iyo rajooyinka cusub si wax looga barto shaqada hadda socota, sahaminta fursadaha soo kordhay, lana dhiso fikradaha cusub.
Si firfircoon ula hawlgala asxaabta McKnight kooxda saamaynta ku leh saamaynta iyo Guddiga Maalgashiga Ergada si ay u aqoonsadaan una falanqeeyaan himilooyinka iyo maalgalinta la xiriirta barnaamijka ee horumariya yoolalka barnaamijka.
Maaree wada shaqeynta muhiimka ah ee maalgelinta dhex-dhexaadiyaasha oo kormeer maalgashiyada cusub iyo kuwa la ballaariyey ee dhex mara wada-hawlgalayaashaas.
Wadahadal oo la shaqee ururada u doodista (oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, kuwa diiradda saaraya caddaaladda cimilada, ilaalinta deegaanka, ka-qaybgalka dimuqraadiyadda, iyo tamar nadiif ah), aasaaska, hay'adaha tacliinta, sharci-dejiyeyaasha, iyo sharci-dejiyeyaasha si ay u taageeraan wadashaqeynta qaybaha kala duwan ee xoojiya yoolalka barnaamijka .
U adeegso sida wakiilka Aasaasiga bulshooyinka barashada iyo ku dhaqanka, gacan ka geysashada qaabeynta jawaabta berrinka iyo taageerada yareynta kaarboonka.
Hoggaanka Fikirka iyo U-doodista
U metelo aasaaska iyo barnaamijka MC&E dhagaystayaasha dibedda isla markaana siiya hoggaan dadaalkeenna ku aaddan sidii loo gaari lahaa hoos u dhigista gaaska aqalka ee hawo-mareenka iyada oo la horumarinayo ballan-qaadka sinnaanta sinjiga.
U adeegso kheyraad ahaan arrimaha farsamada iyo siyaasadda ee la xiriira isbeddelka tamarta. Raad-raac suuqa iyo isbeddellada siyaasadeed si loo aqoonsado fursadaha ka faa'iideysiga sare ee faragelinta samafalka.
U istaag sidii cod lagu kalsoon yahay oo isku tiirsanaanta cimilada iyo caddaaladda midab iyo dhaqaale.
Ugu yaraan toban sano oo khibrad ah arrimaha cimilada iyo tamarta heer deegaan ama heer qaran; khibrad samafal ah oo lagu daray.
Bachelor-ka ama shahaadada mastarka ee cilmiga la xiriira waa suurad wacan.
Daabacadaha, waraaqaha rasmiga ah, shahaadooyinka la xiriira cimilada iyo tamarta.
Xamaasad iyo u heellan xallinta dhibaatada cimilada iyo wax ka qabashada sinnaanta jinsiyadda ee ku aaddan xallinta cimilada. Waa inuu keenaa khibrad nool ama ballanqaad la muujiyey oo wax looga qabanayo cimilada iyo tamarta iyadoo loo marayo muraayadaha sinnaanta.
Hogaamiyaha fikirka qoto dheer ee kalsoonida leh ee cimilada iyo tamarta oo keenaya faham xeel dheer oo ku saabsan dariiqooyinka farsamo, siyaasadeed iyo dhaqaale ee goaaminta dhaqaalaha wadamada warshadaha leh ee Upper Midwest ayaa loo raadinayaa doorkan.
Khibrad shaqo oo toos ah nidaamka tamarta, koronto gelinta gaadiidka iyo dhismayaasha, iyo kaarboonka kala goynta dhulalka shaqeeya.
Diiwaanka raadadka muujinta ee dhisida xiriiro adag oo lala yeesho xulafada iyo khadadka kaladuwanaanta. Awoodda lagu dhex maro kakanaanta jawiyada kala duwan iyo kooxaha daneeyayaasha, iyadoo la doonayo in la fahmo loona kaxeeyo himilooyinka guud marka laga eego aragtiyaha tartamaya.
Si heer sare ah loo soo saaray caqliga shucuurta iyo muujinta awooda isticmaalka xirfadaha dadka dhexdooda iyo karti siyaasadeed si xushmad leh, wadashaqeyn, iyo qaab diblomaasiyadeed.
Nadiifi istiraatiijiyad iyo aragti hawlgal iyo xirfad gaar ah oo ku saabsan soo saarista macluumaadka iyo u turjumidda himilooyinka tallaabooyinka waxqabadka muddada fog iyo tan dhow.
Xirfadaha isgaarsiinta afka iyo qoraalka gaar ahaaneed, oo ay kujirto awooda la muujiyey ee cilmi baarista, dhageysiga, isku dubaridka, iyo falanqaynta macluumaadka, sameynta dukumiintiyada, iyo soo bandhigida xogta si cad oo kooban oo ku habboon shaqaalaha ku habboon, oo ay ku jiraan maamulka sare, shaqaalaha barnaamijka, iyo guddiga agaasimayaasha.
Xirfadaha gorfeynta ee gaarka ah iyo awoodda saameyn ku yeelashada isbeddelka xaaladaha aadka u liita.
Ku-firfircoon oo horay-u-eegis ah si loo raaco isbeddellada loona odoroso isbeddelada iyo saamaynta ay ku yeelan karto ururka.
Machadka McKnight Foundation wuxuu bixiyaa xirmo magdhow tartan ah. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah caafimaadka, ilkaha, nolosha, iyo caymiska naafada; fasax lacag la'aan ah; ku biirinta qorshaha hawlgabka; u dhigma barnaamijka hadiyadaha sadaqada; iyo jawi shaqo oo dabacsan. Kuwani waa waqti buuxa, jagooyin laga dhaafey oo ku saleysan Minneapolis. Xadka mushaharku waa $138,600 ilaa $146,700.
Codsadeyaasha codsanaya ugu dambayn Febraayo 12 markay tahay 5:00 galabnimo waqtiga dhexe ayaa la siin doonaa tixgelinta mudnaanta, iyadoo boosku furan yahay illaa la buuxinayo.
Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest
2019, guddiga agaasimayaasha McKnight waxay ansixiyeen bayaanka howlgalka cusub, oo cusub Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, iyo dhowr isbeddel oo ku yimid maalgelinta barnaamijyada. Dadaalladaas waxaa ka mid ahaa ballaarin weyn oo ay Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest (MC&E), oo ku socota wadadii loo labanlaabi lahaa $16 milyan ee deeqaha sanadlaha ah sannadka 2020 illaa $32 milyan sannadka 2022, taasoo ka tarjumeysa degdegga dhibaatada cimilada iyo mudnaanta sare ee guddiga.
Himilada barnaamijka MC&E ee la ballaariyey ayaa ah qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030. Ku guuleysiga himiladan hamiga leh xawaaraha iyo cabirka lagama maarmaanka ah sidoo kale waxay u baahan tahay a dimuqraadiyad caafimaad qabta, oo salka ku haya cadaalad jinsi iyo mid dhaqaaleed, taas oo dadka oo dhami ay leeyihiin cod iyo awood ay ku keeni karaan isbadal ku saabsan arimaha noloshooda iyo noloshooda saameynaya. Kooxda MC&E waxay ku sii wadi doonaan istiraatiijiyadan iskaashi dhow Bulshooyinka firfircoon & sinnaanta ee McKnight barnaamijka, kaas oo ka taageera bulshada sidii ay u dhisi lahaayeen dhaqdhaqaaqyo badan oo dhaqamo kaladuwan oo isbeddel ah.
Barnaamijka 'MC&E' wuxuu saadaalinayaa kobcinta, dhaqaalaha bartamaha-dhexe ee kaarboon-ka-beddelka iyadoo loo beddelayo nidaamka tamarta iyada oo loo marayo awood nadiif ah, elektaroonigga gaadiidka iyo dhismayaasha, kala-goynta kaarboonka dhulka shaqeeya, iyo xoojinta ka-qaybgalka dimoqraadiyadda. Waxaa lagu dhejiyay qiyamka asaasiga ah ee McKnight, shaqadu waxay ku lug leedahay habab, siyaasado, iyo habab awood u siinaya codadka bulshada, abaabul ficil wadareed, iyo wax ka qabashada sinnaanta midab ee ku aaddan xallinta cimilada.